CCLEANER ပရိုဂရမ်: ဘယ်လိုက WINDOWS 7, 10 အတွက်သုံးစွဲဖို့, အင်္ဂါရပ်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - DISK ကို - 2019
အဓိက Disk ကို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဖူးခဲ့ကြပေမည်ဘယ်လောက်မြန်မြန်နှင့်အစွမ်းထက်နေပါစေ, အချိန်ကျော်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မလွှဲမရှောင်ယိုယွင်းပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ပင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအံဝင်ခွင်ကျနှင့်သာမန်ရှုပ်ပွ operating system ကိုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မှားယွင်းစွာအစီအစဉ်ကိုဖျက်ပစ်, startup မှာရေနံစိမ်း registry ကိုများနှင့်မလိုချင်သော applications များ - အားလုံးဒီစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာလူတိုင်းမကိုယ်တိုင်ဒီပြဿနာတွေကိုအပေါငျးတို့သ fix နိုငျကွောငျးသိသာသည်။ ဒီတာဝန်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲဖို့သင်ယူနိုင်သည့် CCleaner ကို, ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
CCleaner ကို - ကဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ Piriform ၏ developer များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးစနစ်၏ optimization များအတွက် shareware အစီအစဉ်ကိုပါပဲ။ တည်ထောင်သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည်စင်ကြယ်သည် Windows Operating System နှင့် MacOS ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် tool ကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ပဲ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းသစ္စာစောင့်သိအသုံးပြုသူတစ်ဦးကကြီးမားအရေအတွက်က၎င်းတို့၏တာဝန်များကို developer များအပြည့်အဝကျွမ်းကျင်ကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။
CCleaner အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်သောရုရှားဘာသာစကား, ထောက်ခံပါတယ်
အမှိုက်သရိုက် Explorer ကို cache ကိုယာယီဖိုင်များ, ကို browser နှင့်အခြား utilities သန့်ရှင်းရေး;
startup manager ကို;
ထိန်းချုပ်မှုအချက်များကို အသုံးပြု. ပြန်လည်နာလန်ထူမှုစနစ်;
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်သန့်စင်မှုစနစ် disk တွေ,
စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံရိပ်ဖတ်နဲ့ automatic အမှားဆုံးမသောဖြစ်နိုင်ချေ။
Plus အားသီးခြား utility ကိုပုဂ္ဂလိကကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအလုပျကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ရုံးခန်းထဲမှာ CCleaner ကိုတပ်ဆင်ရန်အစီအစဉ်ရှိပါကသင်တစ်ဦးအထုပ်စီးပွားရေး Edition ကိုစီစဉ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ အပိုဆုအဖြစ်, သင် developer များအနေဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
cons by utilities က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုအချို့ချွတ်ယွင်းပါဝင်သည်။ ဗားရှင်းနဲ့စတင်ခြင်း 5,40 အသုံးပြုသူများစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ system ကို disable လုပ်ဖို့နိုင်စွမ်းပျောက်ဆုံးကြောင်းတိုင်ကြား။ သို့သော် developer များတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကတိပေး။
သငျသညျထို program R.Saver သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအသုံးဝင်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်နိုင်သည်:
program ကို install လုပ်ဖို့, ရိုးရှင်းစွာလျှောက်လွှာ၏တရားဝင် site ကိုမှသွားနှင့်ဒေါင်းလုဒ်ကဏ္ဍကိုဖွင့်လှစ်။ အောက်ကိုဆင်းနှင့်လက်ဝဲကော်လံအတွက်လင့်များ၏တဦးတည်းအပေါ်စာမျက်နှာကလစ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်။
အိမ်မှာနေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါသောသူတို့က, သင့်လျော်သောအခမဲ့ option ကိုများအတွက်
ဒေါင်းလုဒ်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်ရရှိလာတဲ့ file ကိုဖွင့်လှစ်။ သငျသညျခကျြခငျြး program ကို install လုပ်ပါသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ setting များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကမ်းလှမ်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းင်းဒိုးလည်းတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ထပ်တိုးဖို့အိပ်ကြဘူး: သင် Antivirus ကို Avast သုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားကြဘူးလျှင်, သင်အောက်ခြေကနေကမ္ပည်းအဆိုပါစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားကိုဖယ်ရှားသင့်တယ် "ဟုတ်တယ်, Avast Free Antivirus ကို install" ။ အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများကသတိထားမိ, အဲဒီနောက် Anti-virus ကိုရုတ်တရက်ပေါ်လာသည်နှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားကြပါဘူး။
လျှောက်လွှာ Installing အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်မြန်
သငျသညျ non-စံလမ်းပေါ်တွင် utility ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလျှင်, ထို "Customize" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီနေရာတွင် directory ကိုနှင့်သုံးစွဲသူများ၏နံပါတ်ရွေးနိုင်သည်။
အများဆုံးဖော်ရွေခြင်းနှင့်နားလည်အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကတူသော installer interface ကို,
ထို့နောက်ရုံ CCleaner ကိုအပြီးသတ်ပြီး run ဖို့ installation ကိုစောင့်ပါ။
ဤအစီအစဉ်၏သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်ကချက်ချင်းကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နှင့်မျှမတို့အပိုဆောင်း configuration ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင်က Setting ထဲကိုသွားနှင့်ကိုယ်အဘို့အဲဒီမှာတစ်ခုခုပြောင်းပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါ interface ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ပုဒ်မသို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်ဆို function ကိုအလျင်အမြန် access ကိုပေးသည်။
အပိုင်း၌သင်တို့ကိုမလိုအပ်တဲ့ system ကိုဖိုင်များ, မမှန်ကန်ကြောင်းခွင်ဝေးလံသောအစီအစဉ်များနှင့် cache ကိုဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ပါလိမ့်မည် "ပျော်စေ" ။ သငျသညျယာယီဖိုင်တွေအချို့အုပ်စုများ၏ဖယ်ရှားရေးကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်သည်ကိုအထူးသဖြင့်အဆင်ပြေ။ သငျသညျတဖနျလုံးကအမိတ်ဆက်ပေးချင်ကြဘူးတယ်ဆိုရင်ဥပမာ,, သင့် browser ကိုသိမ်းဆည်းအော်တိုပြီးဆုံးပုံစံများနှင့် passwords မဖျက်ပစ်ရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ လျှောက်လွှာစတင်ပါရန်, "Analyze" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဓိက window ၏လက်ဝဲဘက်ကော်လံတွင်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုသည့်အကြောင်းအရာများများစာရင်းကို configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
ပြတင်းပေါက်အတွက်အစီအစဉ်၏ကောက်ယူဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားခံရဖို့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်သည့်အကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာလိုင်းနှင့်ကလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ပြသထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို double-click အခါ။
သင် bar ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်နှိပ်လျှင်, menu ကိုသငျသညျ, သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်ဖွင့်လှစ်သည့်ခြွင်းချက်စာရင်းထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်စာသားကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်စာရင်းထဲကိုကယျတငျနိုငျသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ကြလျှင် HDD, သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်လွတ်မြောက်လာ disk space ကိုပမာဏကိုအထင်ကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါဘူး
သည် "မှတ်ပုံတင်မည်" ၌သင် registry ကိုနဲ့ဆက်စပ်သမျှသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤတွင်အားလုံးလိုအပ်သော setting များကိုမှတ်သားပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်ရုံ "ပြဿနာများ search" button ကို click ရန်လိုအပ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်လျှောက်လွှာပူပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ backup လုပ်ထားမိတ္တူကယ်ဖို့သတိပေးလာ, သူတို့ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ "Edit ကိုမှတ်သား" ပေါ်တွင်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါဟာမြင့်မား backup လုပ်ထားရန် registry ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအကြံပြုသည်
သည် "ဝန်ဆောင်မှု" တွင်ကွန်ပျူတာဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အချို့သောအပိုဆောင်းစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်, မလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်များကိုဖျက်ပစ်တဲ့ disk ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေး, ဒါကြောင့်ပေါ်မှာ။ ဃနိုင်ပါတယ်
သည် "ဝန်ဆောင်မှု" တွင်အများအပြားအသုံးဝင်သော features တွေရှိပါတယ်
ကျနော်တို့ကို item "Startup စာမျက်နှာ" ကိုသတိပြုပါချင်ပါတယ်။ ဒီမှာက Windows ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူအလုပ်စတင်ကြောင်းအချို့ Startup programs တစ်ချို့ disable လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
startup ထဲကမလိုအပ်တဲ့ applications များဖယ်ရှားခြင်း, သင်သိသိသာသာသင်၏ကွန်ပျူတာ၏မြန်နှုန်းကိုတိုးပွါးစေ
Oh, နှင့် "Settings" ကို။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပြော၏။ ဒီနေရာတွင်, လျှောက်လွှာ၏ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲခြွင်းချက် configure, နှင့်အလုပ်အကိုင်အဘို့အကဏ္ဍများနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုကိုပျမ်းမျှအသုံးပြုသူများအတွက်ဤနေရာတွင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဤအပိုင်း၏ကျယ်ပြန့်အများစုမူအရမလိုအပ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ PC ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းရေးတက် setting အပါအဝင်သင်သည်တတ်နိုင် "Settings" ကို, လက်အောက်တွင်
ထို့အပြင်အသုံးပြုမှု HDDScan အစီအစဉ်အတွက်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ:
CCleaner ကိုကျော်ကို 10 နှစ်ကြာအသုံးပြုရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းလျှောက်လွှာထက်ပိုတစ်ချိန်ကအမျိုးမျိုးသောဆုနှင့်အပြုသဘောအသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကို, ကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးမော်ဒယ်မှဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကား။
ဗီဒီယို Watch: Tutorial: Cómo usar Ccleaner correctamente - 2019 - Pasoapaso (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Disk ကို 2019